Izakhi Eziyisi-6 Zomkhankaso Wokumaketha We-SMS Ophumelelayo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 8, i-2017 NgeSonto, uDisemba 10, i-2017 Douglas Karr
Abakhangisi baqhubeka nokubukela phansi ukusebenza kwe ukuthumela imiyalezo (i-SMS) yemikhankaso yokukhangisa. Akuyona eyinkimbinkimbi njengezicelo zeselula namawebhusayithi athuthukisiwe weselula - kepha kusebenza kakhulu. Ukuthola umuntu abhalise nge-SMS kulula kakhulu kunokumthola ukuthi alande uhlelo lokusebenza lewebhu leselula ngokuthumela imiyalezo nge-push… namazinga okuguqula angahle abe ngaphezulu!
The Izingxenye ze-Great SMS Marketing Campaign infographic kusuka SlickText igqamisa amaphuzu ayisi-6 abalulekile okufanele uwacabangele lapho uthumela noma yimuphi umkhankaso wokumaketha imiyalezo. Ihluzo ziqinile, imininingwane iyenzeka, futhi sethemba ukuthi uyayijabulela imininingwane ngendlela ebesiyihlanganisa ngayo!
Izinto Eziyisi-6 Zomkhankaso Wokumaketha we-SMS Osebenzayo
Dala okunikezwayo okubalulekile - ngaphandle kwayo, uzolahlekelwa ababhalisile ababalulekile abakunikeze i-premium real estate ukuze ubakhuthaze.
Qala ngokunikezwa - ukuheha nokugcina wonke umuntu obhalisile ngokushesha. Uma becabanga ukuthi umlayezo wakho ukuchitha isikhathi, bazokhipha ohlwini.
Faka ukubizelwa ngqo esenzweni - ukuthi ababhalisile bakho bangasebenza, kungaba ikhodi yesaphulelo noma ukuxhumana okuqondile.
Yakha umuzwa wokuphuthuma - umyalezo wakho kufanele uthunyelwe lapho ufuna obhalisile ukuthi aphendule ngokushesha.
Yenza lo mnikelo ube wodwa - ukuthumela imiyalezo kunesilinganiso esimangalisayo sokuvula nokuguqula, musa ukusichitha ngokunikezwa okujwayelekile. Yenza ababhalisile bakho bazizwe sengathi babalulekile.
Yisho igama lakho lomkhiqizo - ngakho ababhalisile bayazi ukuthi ngubani othumele umyalezo. Akuwona wonke umuntu ohlela zonke izinombolo koxhumana nabo.
Landa i-SlickText's Umhlahlandlela Wokumaketha we-SMS ukuthola izeluleko ezithe xaxa zokusebenzisa umkhankaso wakho olandelayo wokuthumela imiyalezo.
Tags: imikhankaso yeselulaSMSsms ukubizela esenzweniumkhankaso we-smsi-sms ctaukumaketha i-smssms siphoukumaketha imiyalezoimiyalezoukuthumela umlayezo wombhalo ukubizela esenzweniumkhankaso wokuthumela imiyalezoukuthumela imiyalezo ctaUkunikezwa kokuthumela imiyalezo
Feb 16, 2016 ngo-10: 00 AM
Right kuze kube seqophelweni. Ukumaketha nge-SMS kuyinto ongeke uyithathe kancane nakulezo zikhathi. Ngiyabonga!